‘एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम’को प्रभाव : परिवर्तन हुदैँछ विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य र स्वभाव | bethanchokkhabar.com
बुधबार, बैशाख २१, २०७९ | १५:५१:५३ |
काभ्रे : पढाई भइरहेको बेलामा विद्यार्थीलाई बिसन्चो भएमा बिचमै पढाई छाडेर घरै जानुपर्ने बाध्यता देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि छ । घण्टौँ हिँडेर विद्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अर्को समस्या उस्तै छ । जसकारण पनि विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरु देखिने गर्छ ।
केही वर्ष अघिसम्म काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका वडा नं ७ स्थित सञ्जिवनी नमूना माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको भोगाई पनि उस्तै थियो । सामान्य टाउको दुखेमा, पेट दुखेमा, विद्यार्थीहरु घरै जाने गर्थे । घाउ चोट लाग्यो भने, स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल दौडाउनुपथ्र्यो । धेरै विद्यार्थी एकै पटक बिरामी भएमा विद्यालयलाई थप समस्या हुन्थ्यो । विद्यालयमा महिनावारी भएमा पढाई नै छोड्नुपर्ने अर्को समस्या थियो । महिनावारीकै कारण किशोरीहरुको धेरै दिन पढाई छुट्ने गर्थ्यो ।
जबदेखि विद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन भयो, विद्यार्थीहरुले त्यस्तो समस्या भोग्नु परेको छैन । विद्यालयमा २०७६ सालदेखि सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारीता बढ्दै गएको छ । ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम लागू भएपछि विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यमा परिवर्तन आएको विद्यालय जनाएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि विद्यालयमा स्वास्थ्य सेवा कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा स्वास्थ्य सेवा कक्षको व्यवस्था भएकाले पनि विद्यार्थीको नियमित उपस्थिती भएको विद्यालयकी नर्स सचिता विष्ट बताउँछिन् । ‘कार्यक्रम लागू हुनु पहिले विद्यार्थी अस्वस्थ भएकै कारण पनि विद्यार्थीको उपस्थिती संख्यामा कमी देखिएको थियो ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले विद्यालयमै विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हुने भएकाले पनि विद्यार्थी उपस्थितीको संख्यामा बृद्धि भएको पाएका छौँ ।’
उनका अनुसार पढाई भइरहेको बेलामा विद्यार्थी बिरामी भए उनीहरु स्वास्थ्य सेवा कक्षमा आएर दुई /तीन घण्टा आराम गरी औषधी उपचारपश्चात पुनः पढाइका लागि आफ्नो कक्षा कोठामा जान्छन् । यदि बिरामीलाई यहाँबाट उपलब्ध हुने सेवाबाट उपचार गर्न नसकिएमा उनीहरुलाई विद्यालय र अभिभावकको समन्वयमा अस्पताल पठाउने गरिन्छ ।
‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमको राम्रो प्रभाव किशोरकिशोरीमा देखिएको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयको कक्षा ९ मा अध्ययनरत फिदि थिङ यस कार्यक्रमले आफूहरुको स्वास्थ्यमा धेरै परिवर्तनहरु आएको बताउँछिन् । यो कार्यक्रमले विशेष गरेर महिनावारीको समयमा धेरै सहजता प्रदान गरेको उनी सुनाउँछिन् ।
‘पहिले पहिले विद्यालयमै महिनावारी भइयो भने के गर्ने/ कसो गर्ने हुन्थ्यो । महिनावारी लाजको विषय हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले विद्यालयमा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रमपछि हामी महिनावारीलाई लुकाउँदैनौँ । आफ्नो कुरा खुलेर भन्न सक्ने भएका छौँ ।’ विद्यालयले किशोरीहरुलाई निःशुल्क प्याङ वितरण गरेकाले पनि आफूहरुलाई थप सहज भएको उनले बताइन् ।
विद्यालयमा प्रज्जन स्वास्थ्य र यौन शिक्षाको बारेमा पनि शिक्षण गराउनुको साथै स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइने भएकाले विद्यार्थीहरुले आफ्नो समस्या निर्धक्क भन्न सक्ने गरेको विद्यालयकी नर्स सचिता विष्ट बताउँछिन् । त्यसरकारण पनि यो कार्यक्रम किशोरकिशोरीहरुको लागि निकै नै प्रभावकारी भएको देखिन्छ । उनका अनुसार यो शिक्षणले विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यमा समेत धेरै परिवर्तन आएको पाएका छौँ ।
‘यस कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीहरुलाई बाल स्वास्थ्य, सरसफाई, पोषणयुक्त खाना, स्वास्थ्य परामर्श, यौन शिक्षा लगायतका विभिन्न विषयको बारेमा शिक्षण गराउने गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘यी विषयका शिक्षणकै कारण विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य र व्यवहारमा पनि परिवर्तन आएको पाएका छौँ ।’ उनका अनुसार विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य र सरसफाईमा आएको सुधारलाई हामीले यस कार्यक्रमको प्रमुख उपलब्धिको रुपमा लिएका छौँ ।
‘शौचालय प्रयोग गरेपछि साबुनपानीले राम्रोसँग हात धुनुपर्छ भन्ने बानीको विकास भएको छ,’ कार्यक्रमको प्रभावकारीता बारे बताउँदै उनले भनिन्, ‘उनीहरुमा आफ्नो स्वास्थ्यसँगै विद्यालय परिसर र कक्षा कोठाको सरसफाई गर्ने बानी बसेको छ ।’ विद्यार्थीहरुले विद्यालयबाट सिकेको यो अभ्यास आफ्नो घर परिवार र समुदायमा पनि लागू गर्ने गरेको अभिभावकहरु बताउँछन् । अभिभावकहरुले पनि स्वास्थ्य र सरसफाई ध्यान दिन थालेका छन् ।
विद्यालयमै नर्स भएपछि विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यमा सुधार आएको धुलिखेल नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा अधिकृत सरद चन्द्र थापा बताउँछन् । उनका अनुसार विद्यार्थीहरुले आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा आफै राख्न सक्ने भएका छन् । ‘केही वर्ष अघिसम्म विद्यार्थी बिरामी भएमा शिक्षकहरुलाई धेरै तनाव हुन्थ्यो, के गर्ने ? कसो गर्ने ? कहाँ लैजाने ?,’ उनले भने, ‘अहिले विद्यालयमा नर्स भएपछि शिक्षकहरुलाई पनि धेरै सहज भएको छ । विद्यार्थीलाई स्वास्थ्यमा केही समस्या आएमा उनीहरु स्वास्थ्य सेवा कक्षमा गएर उपचार लिन्छन् ।’
यो कार्यक्रम अहिले नगर क्षेत्रका ४ वटा विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारीता बढेको प्रतिक्रिया आइरहेको स्वास्थ्य अधिकृत थापाले बताए । उनका अनुसार यो कार्यक्रम प्रत्येक विद्यालयमा सञ्चालन हुन आवश्यक छ । विद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय शिक्षा र सुस्वास्थ्यका लागि यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुने उनले बताए ।
बागमती प्रदेशले सञ्चालन गरेको ‘एक विद्यालय एक नर्स’ अन्तर्गतको पहिलो चरणमा प्रदेशका २० वटा विद्यालयमा छनौटमा परेका थिए । जसमा जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिका वडा नं २ स्थित पार्वती मा.वि पनि छनौट भएको थियो । पाइलटिङको लागि छनौट भएको उक्त विद्यालयमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि गाउँपालिकाका थप ३ विद्यालयमा पनि सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक प्रमोद तिमिल्सनाले बताए ।
उनका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएसँगै विद्यालयमा हेल्थ क्लब, अभिमुखिकरण, विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच गरि हेल्थ प्रोफाइल जस्ता गतिविधि सुचारु भएको छ । विद्यार्थीको स्वास्थ्य स्थितीबारेमा कक्षागत रुपमा विद्यार्थीका अभिभावक विद्यालयमा बोलाई जानकारी गराउने गरिएकाले यो कार्यक्रमको प्रभाव समुदाय स्तरमा राम्रो भएको पाइएको संयोजक तिमिल्सनाले बताए ।
‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम किशोरीहरुको लागि निकै नै फलदायी भएको बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर तिमिल्सिनाले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम किशोर किशोरी , बालबालिका मात्र नभएर अभिभावकहरुलाई पनि प्रभावकारी भएको छ । यसले सबैलाई स्वास्थ्यप्रति सचेत बनाएको छ ।
‘यो कार्यक्रमले किशोरीहरुको स्वस्थ्य सुरक्षित बनाएको छ,’ उनले भने,‘विशेष गरेर किशोरीहरुले महिनावारीको समस्या बारे खुलेर भन्ने सकिरहेका हुदैँनन् । महिलाको समस्या महिलाले नै बुझ्ने भएकाले किशोरीहरुले आफ्ना समस्या नर्ससँग निर्धक्क राख्न सक्ने भएका छन् । उनीहरु आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफै राख्न सक्ने भएका छन् ।’
जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाका ४ वटा विद्यालयमा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारीताकै कारण विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा बृद्धि भएको रोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राम बहादुर तामाङले बताए । ‘विद्यार्थीको स्वास्थ्य राम्रो भएमा मात्र विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको विद्यालयका विद्यार्थीहको स्वास्थ्य स्थिती राम्रो छ । विद्यालयमा स्वास्थ्य सेवा कक्ष पनि सञ्चालन भएकाले विद्यार्थीहरुको नियमित उपस्थिती भएको पाएका छौँ ।’ यो कार्यक्रमले समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य बारेमा जनचेतना फैलाउन मद्दत गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै यो कार्यक्रम लागू भएको पनौती नगरपालिकामा पनि विद्यार्थीको नियमित उपस्थिती भएको पाइएको नगरपालिकाको विद्यालय श्रोत व्यक्ति महेश्वर जंगमले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो कार्यक्रमको प्रभावकारीतकै कारण स्वास्थ्य, सरसफाई, पोषणयुक्त खानेकुरा लगायतका विभिन्न विषयमा विद्यार्थीहरुले जानकारी पाएका छन् । उनीहरुले आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा आफै राख्न सक्ने भएका छन् । विद्यार्थीहरुलाई यिनै विषयमा केन्द्रित भएर स्वास्थ्य कक्षा पनि सञ्चालन भएकाले यसको प्रभाव राम्रो देखिएको उनले बताए ।
किशोर–किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुधारको आवश्यकता महसुश गरी बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई सन्तुलित र पोषिलो खानेकुराका साथै स्वास्थ्य सरसफाई र पोषण प्रबद्र्धन गर्न विद्यालयमा नर्स राख्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले गरेको थियो ।
कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएसँगै अहिले जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहका प्रत्येक पालिकामा ४ वटा विद्यालय गरी ५१ वटा विद्यालयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । प्रत्येक पालिकाका ४ वटा विद्यालयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भएपनि महाभारत गाउँपालिकाका ३ वटा विद्यालयमा मात्र कार्यक्रम सञ्चालित छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमको प्रभावकारीता जिल्लाको १३ वटै पालिकामा भएको पाइन्छ । कार्यक्रम राम्रो भएकै कारण जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकामा उल्लेखित विद्यालय बाहेक थप ३ वटा विद्यालयमा सोही कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । शाखाका अनुसार कार्यक्रमको राम्रो प्रभाव देखिएकाले पालिकाको आफ्नै श्रोतबाट २०७७ मा शारदा मा.वि र दुलालेश्वर मा.विमा र २०७८ मा वनदेवि मा.विमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
जिल्लाको १३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रमको प्रभावकारीता बढ्दै गएको जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाईका प्रमुख गोकर्णध्वज कार्कीले बताए । उनका अनुसार विशेष गरेर ग्रामीण भेगका विद्यालयमा यो कार्यक्रम निकै फलदायी भएको छ । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने भएकाले उनीहरुको स्वास्थ्यमा सुधार आएको देखिन्छ । यसका साथै यो कार्यक्रमकै सफल्ताका कारण समुदाय स्तरमा सरसफाईमा सुधार आएको पाइएको उनले बताए ।